Maxkamadda sare ee Mareykanka oo gaartay go’aan saameynaya in ka badan 3,000 oo soomaali ah – Calanka.com
Maxkamadda sare ee Mareykanka oo gaartay go’aan saameynaya in ka badan 3,000 oo soomaali ah
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa Isniintii shalay aheyd go’aan ka soo saartay in deganaashaha rasmiga ah ee Green Card aan la siin doonin dadka heysta sharciga kumeel gaarka ah ee loo yaqaan TPS ee sida sharci-darrada ah ku soo galay Mareykanka.
Go’aankan ayaa saameynaya ku dhawaad 400,000 oo qof oo ugu yaraan 3,000 oo ka mid ah ay Soomaali yihiin, kuwaas oo ka kala yimid 12 dal.
“Waa go’aan dhabar-jab weyn ku ah qoysas badan oo Soomaaliyeed, aad ayaan u xumaaday arrintan” ayuu VOA u sheegay Cabdiwaaxid Qallinle oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howl-gala magaalada Minneapolis, Isla markaana gacanta ku haya kiisas badan oo uu saameynayo go’aankan.
“Niyad-jab weyn ayay sidoo kale aheyd in dhammaan sagaalka garsoore ee maxkamada isku raaceen go’aankan, waxaan fileynay in ugu yaraan saddex ka mid ah ay diidaan, waxaan kula talinayaa dadka uu go’aankani saameynayo inay deg-deg u la xiriiraan garyaqaannadooda” ayuu sii raaciyay abuukaate Cabdiwaxiid Qallinle.
Dadkan oo qaarkood ay nolol iyo qoysas ku sameysteen Mareykanka ayaa go’aanka Maxkamadda Sare wuxuu kahor istaagayaa inay dalbadaan deganaashaha Mareykanka.